LG က G5 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
LG က G5 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ LG က G5 စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စမ်းသပ်မှုသည်. ဖုန်းအလားအလာရရှိထားသူ၏အောက်ခြေတွင်၎င်း၏ modular slot ပါ, ဒါပေမယ့်ငါကပြည့်စုံလိမ့်ဘယ်တော့မှသံသယ. ဆဲတဲ့အစိုင်အခဲစမတ်ဖုန်းပေးစဉ်ဒါဟာအသုံးပြုသူများဘက်ထရီကိုအစားထိုးခွင့်ပြုထားခြင်း.
ပျော်စရာကို dual ကင်မရာများ, modular ဒီဇိုင်း, အစာရှောင်ခြင်း processor ကိုအရာနှင့်ကြီးစွာသောမျက်နှာပြင်အတော်လေးအဖြစ်မကောငျးဖြစ်ကြောင်းတည်ဆောက်အရည်အသွေးနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့် undercut နေကြတယ်
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “LG က G5 ပြန်လည်သုံးသပ်: ရုံအမှတ်လွဲချော်နေတဲ့အာဏာကိုအသုံးပြုသူရဲ့မိတျဆှေ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 11 မေလအပေါ်များအတွက် 2016 06.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဆိုပါ LG က G5 ယှဉ်ပြိုင်ဖို့မတူညီတဲ့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်သောတောင်ကိုရီးယားကုမ္ပဏီ၏နောက်ဆုံးပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် Android စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်, တစ်ဦး modular ဒီဇိုင်းနှင့်အာဏာအသုံးပြုသူ features တွေနှင့်အတူ.
အနည်းငယ်ထိပ်ဆီသို့ဦးတည်အဆိုပါဖန်မျက်နှာပြင်ခါးဆစ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ G5 တစ်လူမီနီယမ်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ကွေးဖန်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ LG ရဲ့ပထမဦးဆုံးသတ္တုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါသတ္တုတစ်ဦးပလတ်စတစ်သုတ်ဆေးအတွက် coated ဖြစ်ပါတယ်, သို့သော်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးအတုသတ္တုပလပ်စတစ်ခံစားပေးခြင်း, စိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည့်.
ဒါဟာခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့တည်ဆောက်ထားခံစား, အရမ်းလေးလံမဟုတ်ကြောင်းနှင့်လွယ်ကူကျင်းပရန်စေအနားဝိုင်းထားပြီး, ဖုန်း၏နောက်ကျောဘက်ပူးပေါင်းမည်ဘယ်မှာဒါပေမဲ့လက်၌ချွန်ထက်ခံစားရကြောင်းငယ်လေးတစ်ခက်နှုတ်ခမ်းလည်းမရှိ. ဒါဟာကိုယ့်ကို Samsung မှပြိုင်ဘက်များအဖြစ်ကောင်းတဲ့မခံစားရပါဘူး, HTC က, Huawei နှင့် Apple တို့, တစ်ဦးအရှက်ကွဲခြင်းအရာဖြစ်ပါသည်.
ဖုန်း၏နောက်ဘက်သေးငယ်တဲ့ကင်မရာကပူဖေါင်း။ နေသောနေရာနှင့်လည်းပါဝါခလုတ်အဖြစ်ပြုမူတဲ့လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာရှိပါတယ် – ကအပေါ်ကိုပိုမိုနောက်ပိုင်းတွင်. ဖုန်း၏ရှေ့အ G5 ရဲ့ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့မေးစေ့ကနေခွဲအားလုံးဖန်ဖြစ်ပါသည်. ဖုန်းရဲ့အဆုံးကိုကျော်ဖန်ခါးဆစ်, သောအတော်လေးကောင်းတဲ့ကြည့်ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတက function ကိုရှိပါတယ်.
အဆိုပါ 5.3in ပြုလုပ်ထားတဲ့ Quad HD LCD မျက်နှာပြင် – ခဏတစ်များအတွက် LG ရဲ့အသေးငယ်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့် screen ကို – မြတ်သောဖြစ်ပါသည်. အ AMOLED ဖန်သားပြင်အချို့ကို Samsung ကစမတ်ဖုန်းတွင်တပ်ဆင်ကြောင့်အတော်လေးတူပေါ့ပ်ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပြတ်သားခဲ့, ထွန်းတောက်အရောင်စုံ.
159g မှာ G5 ထိပ်တန်းအဆုံး Android စမတ်ဖုန်းများ၏အပေါ့ပါးဆုံးမဟုတ်ပါဘူး, အ 136g က Galaxy S7 အားဖြင့် undercut နှင့် 152ဂရမ်ကို Nexus 5x. ဒါဟာ 7.7mm မှာအပါးလွှာဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, ကရိုက်နှက် 7မီလီမီတာဟွာဝေး P9, ဒါပေမဲ့မ 7.9mm ကိုယ်ထည်အထူက Samsung သို့မဟုတ်ကို Nexus 5x.
Screen ကို: 5.3အပြည့်အဝကို Quad HD LCD အတွက် (554ppi)
ရမ်: 4RAM ကိုသိုလှောင်၏ GB ကို: 32GB ကို + microSD ကဒ်
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ်: Android မှာ 6.0.1 ကင်မရာကို: 16 -megapixel + 8 -megapixel ကျယ်ပြန့်ထောင့်, 8အမတ်ရှေ့-face
connectivity ကို: LTE ကို, ကို Wi-Fiac, NFC ကို, ဘလူးတုသ် 4.2, AND, FM ရေဒီယို, ကို USB-C နှင့် GPS စနစ်
ဒိုင်မန်းရှင်း: 149.4 x က 73.9 x က 7.7mm
removable ဘက်ထရီနဲ့ microSD card slot ပါ
ဖုန်း၏အောက်ခြေမေးစေ့ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်အတွက်ကျန်သေးသည်လာသောအခါဆဲကနှင့်ဖုန်းအရာကြွင်းလေအကြားကွာဟချက်ရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ LG က G5 Qualcomm ၏ထိပ်တန်း-of-the-line က Snapdragon ရှိပါတယ် 820 တူညီတဲ့ chip ကိုနှင့်အတူအခြားဖုန်းများမှအလားတူ Processor နဲ့လုပ်ဆောင်, အကို HTC အပါအဝင် 10.
app များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲနေချိန်တွင်ထိုသို့ပူပြင်းတယ်, ဒါပေမယ့်ငါကပုံမှန်အသုံးပြုမှုစဉ်အတွင်းနွေးထွေးသောရသတိထားမိမှာဘဲ. အဆိုပါ Processor ကိုသင်နှင့်အတူလုပ်ချင်င့်တော်တော်တာဘာမှအားဖြင့်ဝါးနိုင်စွမ်း, RAM ကို 4GB အစိုင်အခဲ multitasking အဘို့မှတ်ဉာဏ်၏ပဒေသာနေစဉ်.
ဘက်ထရီသက်တမ်း, သို့သော်, အလွန်ကြီးစွာသောမဟုတ်ခဲ့. အီးမေးလ်များရာပေါင်းများစွာနဲ့ငါ့မူလတန်း device ကိုကိုကဲ့သို့အသုံးပြုခြင်း, အတွက်လောင်းအကြောင်းကြားစာများနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတွန်းအားပေး, browsing နဲ့ app ကိုအသုံးပြုမှုထက်ပိုသုံးနာရီ, အထူးဆန်းဓာတ်ပုံနှင့်အမြန်အစက်အပြောက်ပေါင်း စူပါ Crossfighter အ G5 ရုံကျော်ကြာမြင့် 24 နာရီ.
standby ဘက်ထရီယိုစီးမှုညတွင်းချင်းအနည်းငယ်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်, လာနေပြီ 15%- 20% ရှစ်နာရီကြာ၏အာကာသအတွင်း.
ဘက်ထရီဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာတစ်ဦးအပိုအဘို့အဖလှယ်မှုနိုင်ပါတယ်, ကာ microSD card slot အသုံးပြုသူများ built-in 32GB ဖို့ပိုသိုလှောင်မှုကိုထည့်သွင်းဖို့ခွင့်ပြုစဉ်.
customisible အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow
အဆိုပါ G5 အန်းဒရွိုက်၏အနည်းငယ်စိတ်ကြိုက် version ကိုပြေးနဲ့ USB-C နှင့် Qualcomm ၏ QuickCharge နှစ်ခုလုံးကို support 3.0. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ G5 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းပြေး Google ရဲ့ Android 6.0.1 Marshmallow LG ကအားဖြင့်အချို့သောအလင်းစိတ်ကြိုက်အတူ.
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကြောင့်စတော့ရှယ်ယာကို Android နဲ့တူပြုမူ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးအနည်းငယ်ကွဲပြားကြည့်ရှုရှိပါတယ်. ပုံမှန်အားဖြင့်အဖွင့်တင်ပေးရှိသမျှကို install လုပ်ပြီး app များနှင့်ပြည့်ဝ၏အစဉ်အလာကို Android App ကိုအံဆွဲအတူပါလာပါဘူး, iOS နှင့် Huawei ၏ EMUI နှင့်ဝသကဲ့သို့ထိုပင်မမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိသမျှသော apps များရှိခြင်း, ဒါပေမယ့် setting တွင် enabled နိုင်ပါတယ်.
လက်ဝဲ-အများဆုံးပင်မမျက်နှာပြင် pane ထဲကလည်း LG ရဲ့စမတ်စာစောင်အင်္ဂါရပ်များရှိနိုင်ပါသည်, ဝစ်ဂျက်ကိုင်ဆောင်သူအဖြစ်ပြုမူသော, အောက်ခြေထိခလုတ်အရောင်စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်စဉ်, စံကျောထက်ပိုပြီးအမိန့်နှင့်တို, အိမ်နှင့်မကြာသေးမီကအသုံးပြု apps များခလုတ်.
အဆိုပါ G5 လည်းတစ်ဦးအမြဲ-အပေါ် display ကို mode ကိုရှိပါတယ်, သောအချိန်နှင့်မကြာသေးမီကအသိပေးချက်များ၏ icon တွေကိုပြသထားတယ်. ဒါဟာအိမ်တွင်းကောင်းစွာလုံလောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အပြင်မှာဖတ်ရန်ခက်ခဲကြောင်းနှင့်ပတ်ပတ်လည်ကိုအထောက်အကူပြု 1% တစ်နာရီကိုဘက်ထရီသုံးစွဲမှု. သင်ကပါဝါကိုချွေကူညီသင့်အချိန်ကိုစစျဆေးဖို့မကြာခဏပေါ်တွင်သင်၏ဖုန်း screen ကိုဖွင့်လိုလျှင်.
LG ရဲ့ built-in ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု app ကိုလည်းအချိန်ကျော်တက်ဆောက်သော cruft ထွက်ရှင်းလင်းရေးမှာအတော်လေးကောင်းလှ၏, ဒါကြောင့် re-ဒေါင်းလုပ်လုပ်ခံရဖို့သူတို့ကိုအတင်းအကျပ်လိုအပ်မည်အကြောင်းတည်း cache ကိုဖိုင်တွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူအဖြစ်ဒါပေမယ့်သတိပြုရကြမည်.
သော့ဖွင့်ဖို့ touch, သို့မဟုတ်ပိတ်အာဏာသတင်းစာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
နောက်ကျောအပေါ်လက်ဗွေစကင်နာအများဆုံးအခြားနောက်ဘက်လက်ဗွေစကင်နာထက်သေးငယ်သည်နှင့်လည်းပါဝါခလုတ်အဖြစ်ပြုမူ. ငါကမှတပ်ဆင်ကြောင်းသကဲ့သို့ငါ၏လက်ညှိုးကိုအသိအမှတ်ပြုမှာအတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရ LG ကရဲ့ Nexus 5x, သောက Google အတွက်စေသည်. ဒါဟာနေဆဲအတော်လေးအစာရှောင်ခဲ့သည်, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်လျော့နည်းတိကျမှန်ကန်ခဲ့.
အဆိုပါမေးစေ့ detach လုပ်လိုက်သောနှင့်ဖုန်း၏အောက်ခြေမှဖယ်ရှားပစ်ဘက်ထရီ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အ G5 ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းက၎င်း၏ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့အောက်ခြေကဖြစ်ပါတယ်. ဘေးထွက်အပေါ်တစ်ဦး button ကိုနှိပ်ခြင်းနှင့်အောက်ခြေ unhooks နှင့် LG "သူငယ်ချင်းများ" ခေါ်ဆိုသောအရာကိုထည့်သွင်းများအတွက်ဘက်ထရီနှင့်တစ်ဦး modular slot ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထွက် slides.
လက်ရှိတွင် G5 များအတွက်ရရှိနိုင်မှသာအဆွေခင်ပွန်းနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်. ကင်မရာ shutter button ကိုအတူအောက်ခြေအတွက်£ 69 LG က Cam Plus အား slot နှစ်ခု, ဗီဒီယိုတစ်ကားကိုခလုတ်နှင့်လည်းတစ်ဦးတိုးချဲ့ဘက်ထရီပါရှိသည်တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်ကင်မရာကိုချုပ်ကိုင်ထား၏မှတ်တိုင်တန်းစီနေတဲ့ပြေးရတာဘီး.
B က&အိုလည်းတစ်£ 150 Hi-Fi ကို Plus အားရှိပါတယ်, analogue converter ကိုရန် 32-bit နဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်သောဖြစ်ပါသည် (အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကို) သင်ဖုန်းပေါ်မှာနားထောင်ပြီးနေဂီတ၏အသံအရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့ရည်ရွယ်ကြောင်းနှင့်နားကြပ် amp. ဒါဟာကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်အခြားစက်ကိရိယာနှင့်တစ်ဦးကို standalone အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းမှုကိုအဖြစ်လည်းသုံးနိုင်တယ်.
ငါမဟုတ်ဆွဲဆောင်မှုကိုရှာဖွေနေချိန်မှာ, ကနောက်ကွယ်မှစိတ်ကူးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်. အလွန်အနည်းဆုံးကြောင့်အသုံးပြုသူများဘက်ထရီကိုထုတ်လဲလှယ်ဖို့ခွင့်ပြု; LG က၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် charger ကိုအတူတစ်အားလပ်ချိန်မှာရောင်းချ. အတူအခြားကုမ္ပဏီများ slot က-In ဆက်စပ်ပစ္စည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအဆင့်မှာအမည်မသိဖြစ်ပါသည်. စနစ်အလားအလာရှိပါတယ်ပေမယ့်, ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေကစုံစမျးဖို့ G5 ၏ရောင်းအားအပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်.
နှင့်ထဲကအောက်ဆုံး Clipping တစ်ဦးသေနတ်ထဲသို့မဂ္ဂဇင်းထည့်ကဲ့သို့ခံစားရ, တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချကလစ်နှင့်အတူအရပျ၌သော့ခတ်နှင့်အစိုင်အခဲ feeling. ဖုန်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစဉ်ဆက်မပြတ်ကွာဟချက်ရှိပါသည်, သို့သော်, နှင့်ဖုန်း၏ဘေးထွက်အပေါ်လိုင်းများအမြဲဿုံ align ပါဘူး. သငျသညျကိုသတိထားမိပါလိမ့်မယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခြားကိစ္စဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါ dual-camera ကိုမျက်ကပ်မှန်တဲ့လေဆာရောင်ခြည် autofocus နဲ့ flash ၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုင်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆင်တူ ဟွာဝေး P9, အ LG က G5 နောက်ကျောအပေါ်ကင်မရာနှစ်လုံးရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အစားတစ်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဖြစ်ခြင်း၏, LG ကတဦးတည်းပုံမှန် 16-megapixel ကင်မရာနှင့်တဦးတည်း 8-megapixel ကင်မရာ wide-angle ကင်မရာကိုတပ်ဆင်ခဲ့သည်.
ပုံမှန်ကင်မရာကစျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးကင်မရာအများစုမှမြတ်သောနှင့်အလားတူအရည်အသွေးသည်. ၎င်း၏အနိမ့်အလင်းစွမ်းဆောင်မှုဖြင့် Samsung Galaxy S7 တွင်တပ်ဆင်ကြောင်းအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်ကောင်းသောမဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့် G5 ကြွယ်ဝသောကိုထုတ်လုပ်, အသေးစိတ်ပုံရိပ်တွေ, က,fင်စဉ် / 1.8 မှန်ဘီလူးဆို software ကိုပရိယာယ်မပါဘဲလယ်အချို့အလွန်နှစ်သက် bokeh နှင့်ရေတိမ်ပိုင်းအတိမ်အနက်ကိုထုတ်လုပ်.
အပေါ် HDR ကိုအတူယူတစ်ဦးက wide-angle ဓာတ်ပုံဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမ processing ပြီးနောက်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ wide-angle မှန်ဘီလူးဖြစ်ကောင်းပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်. အမြင်၎င်း၏လယ်ကိုသငျသညျတစျဦးမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်အများကြီးပိုပြီးဖမ်းယူနိုင်ရည်ရွယ်, နှစ်ဖက်စလုံးမှာအနည်းငယ်ငါးမျက်စိအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ. ဒါကြောင့်ထုတ်လုပ်ပုံရိပ်တွေအစိုင်အခဲအလင်းအခြေအနေများအတွက်ကောင်းသောခဲ့ကြ, ဒါပေမဲ့စံပြအလင်းရောင်အခြေအနေများကိုထက်လျော့နည်းအတွက်အဓိကကင်မရာအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောငျးခဲ့ကြ.
8-megapixel ကင်မရာ selfie ကင်မရာကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်အသေးစိတ်နှင့်အတူတော်တော်လေးကောင်းသောဓါတ်ပုံကိုထုတ်လုပ်, ကရရှိနိုင်ပါပိုကောင်း selfie ကင်မရာ၏တစ်အောင်.
အပေါ်က wide-angle ကင်မရာကိုအထဲကဓာတ်ပုံကဲ့သို့တူညီသောအနေအထားကနေယူ 16-megapixel ကင်မရာသာမန်ကင်မရာကိုသုံးပြီးတစ်ဦးကဓာတ်ပုံတစ်ပုံ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါနှစ်ဦးနောက်ဘက်ကင်မရာအတူတူအတူကစားရန်ပျော်စရာခဲ့ကြ, ဘက်ပေါင်းစုံဓါတ်ပုံအမျိုးမျိုးကိုခွင့်ပြု, တခါမှာအားလုံးသုံးကင်မရာများတစ်ခုကိုတယောက်အပါအဝင်. ကင်မရာ app ကိုလည်းမျှမျှတတပြည့်စုံသည်, အစိုင်အခဲ Point-and-shoot ကင်အလိုအလျောက်နဲ့လုံလောက်လက်စွဲထိန်းချုပ်မှုနှင့်အများဆုံးလူများအတွက်ဖြည့်တင်းဖို့ RAW ထောက်ခံမှုနှင့်အတူ.
နောက်ကျောအပေါ်ပါဝါခလုတ်ထားရှိခြင်းကစားပွဲပေါ်င်အခါသင်အလွယ်တကူမျက်နှာပြင်ကို turn off မနိုင်ကိုဆိုလိုသည်
တစ်ဦးမှာ IR blaster သင့် TV ကိုထိန်းချုပ်ဘို့ထိပ်၌ရှိပါတယ်
အဆိုပါ LG က G5 သုံးအရောင်များလာနှင့်£ 500 ကုန်ကျ.
နှိုင်းယှဉ်, အက Samsung Galaxy S7 £ 550 ကုန်ကျ, ထို က Galaxy S7 Edge £ 639 ကုန်ကျ, ထို HTC က 10 £ 570 ကုန်ကျ, ထို ဟွာဝေး P9 £ 449 ကုန်ကျ ပြီးနောက် ကို Nexus 5x £ 299 ကုန်ကျ.
အဆိုပါကင်မရာများကြီးမြတ်ပျော်စရာဖြစ်ကြ, ဒါကြောင့်ကို USB-C နဲ့ကာ microSD card slot ရှိပါတယ်, အလွန်ကြီးစွာသော screen နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာဒီဇိုင်း. သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအမေးစေ့ကိုဆက်သွယ်ရှိရာကွာဟချက်အဖြစ်သေးငယ်တဲ့ niggles, စူးရှသောပူးပေါင်းလိုင်းများ, ကိုယျခန်ဓာနှင့်စိတ်ပျက်စရာဘက်ထရီအသက်တာ၏ပလပ်စတစ်ခံစားအ G5 ယခုအချိန်တွင်ရရှိနိုင်တာအကောင်းဆုံးအဖြစ်အတော်လေးအဖြစ်မကောင်းမသင့်ဖြစ်၏ဆိုလိုသည်.
ဒါဟာဆက်ဆက်တစ်ဦးအာဏာအသုံးပြုသူရဲ့ device ကိုဖွင့်, ရရှိနိုင်ပါအားလုံးနီးပါးသည်အခြားထိပ်တန်းအဆုံးစမတ်ဖုန်းထက်အများကြီးပိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အတူ. ဒါဟာကျိန်းသေကောင်းတစ်ဦးကိုဖုန်းရဲ့, မဖြောင့်တကယ့်ကြီးမြတ်တယောက်.
အကောင်းအဆိုး: modular ဒီဇိုင်း, အလွန်ကြီးစွာသောကင်မရာများ, ကောင်းသောမျက်နှာပြင်, အစားထိုးဘက်ထရီ, microSD card slot, ကို USB-C ကို
Cons: ပရီမီယံတည်ဆောက်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်း, ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုမအကောင်းဆုံး, အချို့သောအဖြစ်လက်ဗွေစကင်နာအတော်လေးအဖြစ်မကောငျး
HTC က 10 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: Samsung ရဲ့အကောင်းဆုံးနှင့်အတူရှိတက်
Android မှာ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, LG က, မိုဘိုင်းဖုန်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်ဖုန်း, နည်းပညာ, ဗြိတိန်နိုင်ငံနည်းပညာ
← လောင်းကစားသချာင်္ Changed ခုနစ် Lucky နည်းလမ်းများ ဘဝက hack: သငျသညျမရှိရင်မဖြစ်သင့်တဲ့အကြောင်းကြောင်း Apps ကပ →